माधव नेपाल पक्षधर बहुमत सदस्यहरु ओलीकै पक्षमा उभिने, माधव नेपाल थप दबाबमा ! « रिपोर्टर्स नेपाल
माधव नेपाल पक्षधर बहुमत सदस्यहरु ओलीकै पक्षमा उभिने, माधव नेपाल थप दबाबमा !
प्रकाशित मिति : 2021 March 27, 8:34 pm
काठमाडौं, १४ चैत्र । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । आज (शनिबार) काठमाडौंको कालिमाटीस्थित् एक ब्यांक्वेटमा बसेको नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले अध्यक्ष ओलीसँग नै मिलेर जानुपर्ने भनाई राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार अब पार्टी एकतालाई जोगाउनको लागि नै बहुमत सदस्यहरुले लागिपर्ने भन्दै अब सोहीअनुसार अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए ।
नेता नेपालले सबैको कुरा सुनेपछि आफूले सबैको भावनाको कदर गर्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय एमालेमा नेता नेपाल दबाबमा परेका छन् । पार्टीले नेता नेपालसहित नेताहरु डा. भीम बहादुर रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अहिलेसम्म नेता नेपाल र रावलले मात्रै स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ दिएका छन् । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि ओलीले नेता नेपाल र रावल दुवैलाई आफूले कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन् ।
हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल पक्षधर सांसदहरुको सहभागिता रहेको थियो । तर, नेपाल र रावल भने उक्त बैठकमा सहभागी भएनन् । अब सबै हिसाबले पार्टीभित्र ओली नै शक्तिशाली भएकोले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा नेता नेपाल पक्षधर नेताहरु एकमतका साथ उभिएका छन् । File Photo/ReportersNepal
‘भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ, महिला हिंसा नहुने शहर हुँदैन्’ भन्दै माईतीघरमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ४ असार। महिला हिंसाविरुद्ध आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । महिलाहरुमाथि हुने सबैखाले हिंसाको
राष्ट्रिय सहमति जुटाएर एसपीपी सम्झौता रद्द गरौँ : नैनसिंह महर
काठमाडौं, ४ असार । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अमेरिकाको स्टेट
‘भिसालगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी नभएको एनआरएनए स्पेनका अभियन्ताहरुको गुनासो’
काठमाडौं, ४ असार । गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्ताहरुले सरकारले संघले अघि सारेका नागरिकता र लगानीसम्बन्धीका
काठमाडौं ओर्लनेबित्तिकै दुवईका राजकुमार दुर्गा प्रसाईसँग झापा लागे
काठमाडौं, ४ असार । दुबईका राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुम नेपाल आइपुगेका छन्
प्रधान सेनापति शर्मा लेबनान प्रस्थान
काठमाडौं, ४ असार । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान प्रस्थान गरेका छन् । द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा
चितवन, ३ असार : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र- ३ बाट निर्वाचित